‘सहिद’ कथाको पर्यावरणीय अध्ययन–१ – Chitwan Post
प्रस्तुत समीक्षा गुरूप्रसाद मैनालीको ‘सहिद’ कथाको पर्यावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित छ । यो फ्रान्सेली हिप्पोली अडोल्फ टेनको साहित्यिक समाजशास्त्रीय विश्लेषणको आधारमध्ये एक हो ।
यिनको ‘हिस्ट्री अफ इङ्लिस लिटरेचर’ नामक ग्रन्थबाट साहित्यको समाजशास्त्रीय अध्ययन परम्पराको प्रारम्भ भएको हो । यिनले साहित्यलाई समाजका बारेमा थाहा पाउने मूल स्रोत मानेका छन् । उनले समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतिअन्तर्गत प्रजाति (जाति), क्षण (युग) र पर्यावरण (परिवेश)सम्बन्धी सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस कथामा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपूर्वको परिवेशलाई लिइएको छ । यसका लेखकले कथावस्तुको समयावधि नतोके पनि २००७ सालअघि वा पछिको छोटो समयको यथार्थलाई देखाइएको छ । यस कथाको प्रमुख पात्र वीरबहादुरले भोगेका सङ्घर्षमय जीवनको यथार्थ चित्रण गरिएको छ ।
कथामा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००७ सालपूर्व नेपालीहरुले गरेको जनक्रान्तिलाई समेटिएको पाइन्छ । यस कथाले समाजमा भएको शोषण, अन्याय, अत्याचार र यातनाबाट पिल्सिएका वीरबहादुर, धनेजस्ता पात्रहरुको कारूणिक चित्रण गरेको छ । यस कथामा देश र विदेशका विभिन्न ठाउँहरुको वर्णन छ । यसका पात्रहरु सहरिया जीवन र गाउँले जीवनको प्रस्तुत यथार्थ भोगाइमा छन् ।
उनीहरुले आफ्नो जीवन धान्न सामन्ती वर्गको व्यवहारले घर छोडी विदेशिएको देखिन्छ । त्यसैले यसमा भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सन्दर्भहरु पर्यावरणका रुपमा आएको छ । कथाकारले वीरबहादुरका माध्यमबाट सच्चा देशप्रेम, निःस्वार्थ सेवाभाव र श्रमप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ उच्च हुनुपर्ने सङ्केत गर्दै सच्चा नेपालीले प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदानलाई हिप्पोली अडोल्फ टेनको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा यस कथाको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गरिएको छ ।
शब्दसूची : सहिद, भौगोलिक पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण ।
‘सहिद’ गुरूप्रसाद मैनाली (विसं १९५७–२०२८) द्वारा रचित कथा हो । प्रस्तुत कथा ‘नासो’ कथासङ्ग्रहमा सङ्कलित छ । ‘नासो’ (१९९२) कथाबाट नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । उनको ‘नासो’ (२०२०) कथासङ्ग्रहमा जम्मा ११ वटा कथाहरु रहेका छन् । ती कथाहरुमध्ये ‘सहिद’ एउटा हो । यो कथामा २००७ सालको जनक्रान्तिको चित्रण गरिएको छ ।
साहित्यमा कथालाई ज्यादै लोकप्रिय गद्य विधाका रुपमा लिइन्छ । मानिसको चेतना र विकाससँगै कथाको विकास भएको मानिन्छ । कथा गद्यमा लेखिने कला हो । यो आख्यानात्मक विधा हो । यसमा जीवन–जगत्का घटना–परिघटनालाई कार्य र कारणको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । कथामा पात्र र परिस्थितिका बीच द्वन्द्व हुन्छ । कथामा पात्रका आचरण, गतिविधि र भोगाइहरु परिवेशका रुपमा प्रस्तुति गरिन्छ ।
विश्वसाहित्यमा समाजशास्त्रका जन्मदाता अगस्त कोम्टे (१८२८–१८९३) हुन् । उनले परिवार, नातेदारी, धर्म, विवाह आदिको अन्तःसम्बन्धबाट समाजको निर्माण भएको मान्दछन् । समाजशास्त्रले मानिसको समाजसँगको सम्बन्धको अध्ययन गर्दछ भने साहित्यको समाजशास्त्रले समाजसित साहित्यको सम्बन्धको खोजी गर्दछ । साहित्यमा व्यक्तिका चेतना त¤वहरु समाजबाट निर्मित भएका हुन्छन् ।
त्यसैले, साहित्यको समाजशास्त्र कृतिमा व्यक्त भएको चेतना र ऊ बाँचेको धरातलको खोजी गरिन्छ । कुनै पनि कृति शून्यमा रचना हुन सक्दैन, हरेक साहित्यिक कृतिको रचना हुनाका पछाडि समाज मह¤वपूर्ण आधार वा कारण बनेर उभिएको हुन्छ । समाजबाट लेखक कच्चा पदार्थ लिने र पुनः समाजलाई प्रशोधित गरिदिने काम साहित्यमार्फत गर्दछ । साहित्यिक कृतिमा कृतिकारद्वारा आफू बाँचेको समय र समाजका चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता र आस्थाहरुका साथै परम्पराको अभिव्यक्ति गरिएको हुन्छ ।
समाजको सामूहिक व्यवहारहरु जस्तैः शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि अवस्थाहरु साहित्यिक कृतिमा केकसरी अभिव्यक्त भएका छन् ? भनेर गरिने अध्ययन नै साहित्यको समाजशास्त्रीय अध्ययन हो । साहित्यको समाजशास्त्रीय अध्ययनमा विभिन्न विद्वान्हरुले भिन्न–भिन्न आधारहरु प्रस्तुत गरेका छन् । तीमध्ये फ्रान्सेली चिन्तक हिप्पोली टेनको पर्यावरणसम्बन्धी सिद्धान्तमा टेकेर ‘सहिद’ कथाको विश्लेषण गरिएको छ ।
साहित्यको समाजशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा ‘सहिद’ कथाको पर्यावरण विश्लेषण गर्नु यस लेखको शोध समस्या हो । यस कथामा केकस्तो पर्यावरणीय चित्रण गरिएको छ भन्ने विषय नै यसको मूल समस्या हो । उल्लिखित शोध समस्यालाई निम्नलिखित प्रश्नहरुबाट थप प्रस्ट पार्न सकिन्छ :
(क) ‘सहिद’ कथामा पर्यावरणसम्बन्धी अवधारणा कसरी प्रकट भएको छ ?
(ख) ‘सहिद’ कथामा पर्यावरणको प्रयोग केकसरी गरिएको छ ?
‘सहिद’ कथाको पर्यावरणीय विश्लेषण गर्ने मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन् ः
(क) कथा विश्लेषणका लागि हिप्पोली टेनको पर्यावरणसम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार पहिल्याउनु ।
(ख) ‘सहिद’ कथामा प्रयोग भएको पर्यावरणको खोजी र विश्लेषण गर्नु ।
४. अध्ययनको विधि
साहित्यको समाजशास्त्रीय अध्ययनका सिद्धान्तहरुमध्ये हिप्पोली अडोल्फ टेनको पर्यावरणसम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा ‘सहिद’ कथामा चित्रित पर्यावरणीय पहिचान गरी त्यसकै आधारमा विश्लेषण गरिने भएकाले यो मुख्यतः निगमनात्मक विधिमा केन्द्रित छ । स्थापित सिद्धान्तको आधारमा अध्ययनको आधार तयार पारिएको भए तापनि कथा विश्लेषणका सन्दर्भमा भने आगमनात्मक विधिको प्रयोग गरिएको छ ।
कुनै पनि साहित्यिक सिद्धान्तको प्रतिपादन एकैपटक भएको हुँदैन । कुनै पनि विषयले सैद्धान्तिक रुप ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले लामो पृष्ठभूमि काल पार गरेको हुन्छ । साहित्यको समाजशास्त्र पनि समाजशास्त्रकै एउटा अभिन्न अंश भएकाले यसको मूल आधार समाजशास्त्र रहेको छ । साहित्यको समाजशास्त्रीय आलोचनाको अध्ययन परम्पराको आरम्भ र विकास पाश्चात्य समालोचकबाट भएको पाइन्छ (क्षेत्री, २०६४ : १६–१७) । साहित्यको समाजशास्त्रको पृष्ठभूमि खोज्दा हामी प्लेटोसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । उनको अनुकरण विषयक अवधारणामा साहित्यलाई समाजको प्रतिबिम्बका रुपमा देखाउने प्रयास भएको पाइन्छ । समाजले साहित्यको स्वरुप निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा सत्रौँ, अठारौँ शताब्दीतिर मात्र निर्धारित भएको हो । अठारौँ शताब्दीका प्रसिद्ध इटालेली विधिशास्त्री गियाम्ववाटिस्टा बिकोको ‘द न्यू साइन्स’ (सन् १७२५) लाई यस मान्यताको प्रारम्भिक र प्रमाणिक रचना मानिन्छ ।
उन्नाइसौँ शताब्दीमा आएर समाज र साहित्यको सम्बन्ध व्यवस्थित र सैद्धान्तिक अध्ययन फ्रान्सका दार्शनिक, इतिहासकार तथा निबन्धकार हिप्पोली एडल्फ टेनबाट प्रारम्भ भएको हो । टेनलाई वैज्ञानिक, समाजपरक र यथार्थवादी समालोचनाको थालनी गर्ने पहिलो व्यक्ति मानिन्छ । समालोचनालाई समाजतर्फ ढल्काउनेहरुमा यिनको नाम अगाडि रहेको छ । टेन व्यक्तिभन्दा बढी जाति, क्षण र पर्यावरणको सन्दर्भबाट साहित्यको मूल्याङ्कन गर्ने समालोचक हुन् । उनले कृति रचिएका युगको पर्यावरणको आधारमा कृतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उनको ‘अङ्ग्रेजी साहित्यको इतिहास’ (सन् १९०६) नामक ग्रन्थबाट साहित्यको समाजशास्त्रीय अध्ययन परम्पराको थालनी भएको हो (क्षेत्री, २०६४ : १७) ।
साहित्यको समाजशास्त्रीय अध्ययनमा टेनले जाति र युगजस्तै पर्यावरणलाई पनि बलियो आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बाल्जाकले समाजशास्त्रीय रुपमा ‘ह्युमन कमेडी’ भन्ने उपन्यासमा परिवेश शब्दको पहिलोपटक प्रयोग गरेका थिए । त्यसैबाट टेनले यस शब्दलाई अपनाएका हुन् । उनले परिवेशको मुख्य आशय प्रकृति भए पनि सामाजिकरुपमा परिवेशलाई लिएका छन् । उनले भौगोलिक वातावरणले साहित्यमा असर पार्ने बताएका छन् । त्यसैले, भौगोलिक संरचना तथा प्राकृतिक स्थिति प्रतिकूल हुनुका कारण उत्तरका साहित्यमा दुःख, कष्ट, पीडा र भोकमरी पाइन्छ । त्यसैगरी, दक्षिणको भौगोलिक संरचना अनुकूल हुनुका कारण त्यहाँको साहित्यमा खुसी, शान्ति तथा हर्षोल्लास पाइन्छ भन्ने टेनको धारणा रहेको छ (पाण्डेय, इ. १९८९ : १२५) । उनका अनुसार साहित्यमा अनुकूलता र प्रतिकूलताको चित्रण परिवेशले निम्त्याएको हुन्छ । त्यसैले, मानिसको चारैतिर प्रकृति तथा समाज हुने भएकाले ऊ कहिल्यै पनि एक्लो हुँदैन । उसका आदिम प्रकृति तथा प्रजातिगत विशेषताहरु भौतिक, सामाजिक परिस्थिति तथा घटनाहरुबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने उनको धारणा रहेको छ । टेनका विचारमा पर्यावरणसम्बन्धी सिद्धान्त साहित्यको कार्य, कारण सम्बन्धलाई पूर्णरुपमा व्याख्या गर्ने सिद्धान्त हो (जैन, इ. १९९२ : २४) । उनले परिवेशअन्तर्गत हावापानी तथा भौगोलिक परिवेशलाई मह¤व दिँदै साहित्यको सूक्ष्म विश्लेषणका लागि सामाजिक र राजनीतिक परिवेशलाई पनि साहित्यसँग जोड्ने प्रयास गर्दछन् (जैन, इ. १९९२ : २५) । साहित्यकार जुन युगमा बाँचेको हुन्छ त्यस युगको पनि आफ्नै सामाजिक समस्या, मूल्य, मान्यता एवम् विश्वासहरु हुन्छन् । साहित्यमा यिनै समस्या, मूल्य र मान्यताहरुलाई पर्यावरणका रुपमा टेनले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रत्येक साहित्यकारले जन्मदेखि नै आफ्नो वरपरको पर्यावरणबाट प्रभाव ग्रहण गर्दछ । यी प्रभावहरु नै पछि उसका साहित्यिक अभिव्यक्ति क्रियाशील हुन्छन् र साहित्य त्यही प्रभावबाट साधनारत हुने गर्दछ ।
कुनै पनि कथामा कथाकारले पात्रलाई परिवेशको केन्द्रीयता राखेर आपूmले देखे, सुने र भोगेका सामाजिक घटना, परिघटनाहरुलाई प्रस्तुत गर्दछन् । कुनै पनि कृतिमा विषयवस्तु वा कथाअनुसार प्रकृति निर्धारण गरिएको हुन्छ । यस्तो पर्यावरणले जातिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । कथाका माध्यमबाट लेखकले त्यस समयका चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कार, भेषभूषा, भाषा, जीवनपद्धति, विचार तथा भौगोलिकताजस्ता परिवेशगत पहिचानलाई अभिव्यक्त गराएका हुन्छन् । कृतिमा विषय र पात्र सान्दर्भिक पर्यावरण निर्माण गरिएको हुन्छ । यही कृतिमा वर्णित सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको खोजी गर्नु समाजशास्त्रीय अध्ययनमा अपरिहार्य रहन्छ । त्यसैले, कथामा समाज, वर्ग, राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरु पनि पर्यावरणका रुपमा पाइन्छन् । त्यसैले, सांस्कृतिक परिवेश निर्माणको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावी आर्थिक अवस्था हो । कृतिमा आर्थिक परिवेशको निर्माण कसरी गरिएको छ र त्यसको वर्गीय संरचना निर्माणमा केकसरी भूमिका खेलेको छ ? आधार–रचना र अधिरचनाको स्वरुपहरु आर्थिक पक्षसँग कसरी जोडिएका छन् ? भन्ने पक्षको खोजी नै टेनको मान्यतामा आर्थिक पर्यावरण हो भने कृतिरचनामा समय सान्दर्भिक सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाको प्रभाव रहन्छ । राष्ट्रको विकसित राजनीतिक चेतनाले वैचारिक पक्षको आधार तय गर्दछ । युगीन परिवेशले जीवन्त विचारको सुसङ्गठित स्वरुप निर्माण गर्दछ । यहाँ ‘सहिद’ कथालाई यही पर्यावरणीय पहिचानको आधारमा अध्ययन गरिएको छ ।
‘सहिद’ कथा प्रजातन्त्र प्राप्तिपूर्वको परिवेशलाई लिएर वीरबहादुरको केन्द्रीयतामा रचिएको सामाजिक आदर्शोन्मुख कथा हो । विदेशमा कडा मेहनत गरेर केही पैसा कमाइ साहूको ऋण तिर्न उद्यत स्वाभिमानी वीरबहादुर र शिक्षित म पात्रको संवादबाट कथा सुरू भएको छ । वीरबहादुरजस्ता अशिक्षित, अनपढ नेपालीलाई त्यहाँ पढ्न बसेका विद्यार्थीहरुले चिठ्ठी लेख्न मद्दत गरेका छन् । वीरबहादुरले साहूसँग ऋण लिएको चर्को व्याज बुझाउन परेकाले स्वास्नी र छोरीलाई छाडेर विदेश पसेको यथार्थ सुनाउँछ । त्यहाँ उसले रिक्सा चलाउने काम गर्छ । कडा परिश्रम गरेर केही पैसा कमाउँछ तर उसको कमाइ आफ्नै साथी धनेले चोरी दिन्छ । धने चोरी केसमा पक्राउ पर्दा पनि वीरबहादुरलाई खुसी लाग्दैन, किनकि वीरबहादुर मानवतावादी पात्र हो । प्रवासमा उसले दुःखमा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने, काम नपाएकाहरुलाई काममा लगाइदिने, बिरामी परेकाहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउने, अलपत्र लासलाई घाटसम्म पु¥याएर नेपाली संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्नेजस्ता आदर्शमय तथा अनुकरणीय कामहरु गर्दछ ।
छोरो मरेको खबर सुनेर घर फर्किएको वीरबहादुरको भेट देवताबाबुसँग हुन्छ । उनकै सल्लाहबमोजिम मातृभूमिको पुकारभन्दा स्वास्नी, छोराछोरीको पुकार ठूलो होइन भन्दै ऊ मुक्ति सङ्घर्षमा होमिन पुग्दछ । आन्दोलनमा समर्पित वीरबहादुरलाई विराटनगरमा भएको सरकारी सेना र मुक्ति सेनाबीचको लडाइँमा गोली लाग्छ । यसरी अस्पतालको बेडमा बीरबहादुरको पुनः म पात्रसँग भेट हुन्छ । घर जान भनी हिँडेको वीरबहादुरले आफू आन्दोलनमा लागेर घाइते भएको सबै वृत्तान्त म पात्रलाई सुनाउँछ । उसले आफ्नी डल्लीलाई चिठी लेखिदिन पनि आग्रह गर्छ । म पात्रलाई वीरबहादुरको जीवन, उसकी श्रीमतीको दुरवस्था, छोराको मृत्युसँगै लोग्नेको मृत्यु र सायद अब डल्लीसँग लोग्नेको किरियाकाष्टा गर्ने पैसासम्म नहोला भन्ने चिन्ताले ऊ गम्भीर बन्छ ।
भोलिपल्ट बिहान राष्ट्रिय झन्डाले ढाकेर फूलमाला, अबिर र लाभाले सिँगारिएको वीरबहादुरको लास बोकेर हतियार बन्द सिपाहीहरु, स्वयंसेविकाहरुको ठूलो समूहले प्रजातन्त्रको नारा घन्काउँदै आइरहेको देखेर म पात्र दुःखद संवेदनाको चरम अनुभूतिमा पुग्छ । अनायासै उसका आँखाबाट आँसुका धार बगेको प्रसङ्गसँगै कथाको अन्त्य भएको छ ।
७. ‘सहिद’ कथाको पर्यावरणको पहिचान र विश्लेषण
टेनले पर्यावरणको चर्चाका क्रममा प्राकृतिक तथा भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र जलवायुलाई मह¤व दिएका छन् । उनले राजनीतिक र सामाजिक स्थितिलाई पनि साहित्य विशेषसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । टेनले आफैँले प्रतिपादन गरेका तीन निर्धारक त¤वमा असन्तुष्ट भई त्यसमा एक मनोवैज्ञानिक आयाम दिएर आफ्ना तीन सूत्रलाई पुनः सुदृढ गरेका हुन् (जैन, इ. १९९२ : २५) । यसबाट टेनले पर्यावरणअन्तर्गत जलवायु तथा भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षलाई मह¤व दिएका छन् । साहित्यमा प्रयुक्त हावापानीको विश्लेषणभन्दा पनि सामाजिक घटना र व्यक्तिको आन्तरिक परिवेशको चिरफारबाट तत्कालीन वस्तुस्थिति अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले, उनका कथामा स्थानअनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता र विकास भएको देखाइएको छ (गिरी, २०७६ : १०१) । कथाकारले ‘सहिद’ कथामा आफू जन्मे, हुर्केको पर्यावरणलाई प्रभावका रुपमा ग्रहण गरी प्रस्तुत गरेका छन् । तत्कालीन नेपाली भू–धरातल, नेपालीहरुका संस्कार, रीतिरिवाज, रहनसहन, जीवनपद्धति, शैक्षिक एवम् बौद्धिक चेतना, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक स्थिति आदिबाट कथाका विभिन्न सन्दर्भमा पर्यावरण उल्लेख गरेका छन् । यस कथामा प्राकृतिक तथा भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सन्दर्भहरु कथामा पर्यावरणका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
७.१ भौगोलिक पर्यावरण
यस कथामा प्रयोग भएका प्राकृतिक तथा भौगोलिक पर्यावरणलाई पहिचान गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
साक्ष्य १ :
तपाईं नेपाल फर्कने बेलामा आफ्नो रिक्सामा स्टेसनसम्म पु¥याइदिऊँला (पृ. ५८) ।
यस साक्ष्यमा भारतको रेल स्टेसननेरको मञ्चीय पर्यावरणका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । वीरबहादुरले चिठ्ठी आफ्नो परिवारका लागि लेखिदिन आग्रह गरेको सन्दर्भमा यो आएको हो । देउताबाबुले सहरका आधाभन्दा बढी कुल्ली–कबाडी, दरवानी, रिक्सावाला नेपालीहरुको चिठ्ठी लेखिदिन्थे । उनले नोकरी, बेखर्ची र बिरामीहरुको उपकार गरिदिन्थे, तर घर गइसकेको भन्ने खबरले वीरबहादुर स्तब्ध हुन्छ । उसले ‘म’ पात्रलाई चिठी लेख्न अनुरोध गरेको छ । वीरबहादुरले ‘म’ पात्रलाई चिठी लेखेबापत दिने पैसा नभएको हुँदा नेपाल फर्किने बेलामा स्टेसनसम्म पु¥याइदिऊँला भनेको पाइन्छ । त्यसैले, २००७ सालतिरको समयमा भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरुको दुःख, कष्ट र पीडालाई यथार्थ चित्रण गरिएको छ । यसको सम्बन्धित विषय मञ्चीय पर्यावरण भौगोलिक परिवेशका रुपमा आएको छ ।
रातभर तेह्र नम्बरको कमरामा बसेर जुवा खेल्छ अनि बाँकी पैसा त्यही स्टेशननेरको चिया बेच्ने साहिँली छ नि, हो उसलाई दिन्छ र रक्सी धोकेर आधा दिनसम्म सुतिरहन्छ (पृ. ६४) ।
यस साक्ष्यमा सहरको विकृति र विसङ्गति मौलाउँदै गएको यथार्थ देखाइएको छ । वीरबहादुरले तेह्र नम्बर कोठाको विकृत पर्यावरणको अवस्थालाई बोध गराएको छ । धनेले वीरबहादुरको ट्रङ्क फोरेर सबै रूपैयाँ चोरेको उल्लेख गरिएको छ । धनेले आफ्नो पैसा चोरेको, रक्सीको कुलतमा फसेको, धनेले चोरेको थाहा पाउँदा पनि कसैले धनेलाई सजाय दिन तम्तयार नभएको जस्ता प्रसङ्ग भौगोलिक पर्यावरणका रुपमा आएको देखिन्छ । त्यसैले, यस कथाका पात्रहरु २००७ सालतिरका भएकाले आफ्नै भौगोलिक मूल्य, मान्यतामा बाँचेका छन् । उनीहरु विदेश धन कमाउन गए पनि भौगोलिक संरचनाअनुरुप अनुकूल र प्रतिकूल भएर बाँच्न बाध्य भएको चित्रण गरिएको छ ।
एक सातापछिको कुरा हो । वीरबहादुरसँग स्टेसननेरको बरको रुखमुनि भेट भो । साइकल–रिक्सा सियाँलमा राखेर पानको पसलअगाडि बिँडी तान्न लागेको रहेछ (पृ. ६५) ।
यस साक्ष्यमा रुखको शीतल छहारीमा बस्ने बेलामा मौसमलाई जनाइएको छ । वीरबहादुरले बिहेमा साहूसँग लिएको एक सय रूपैयाँको व्याज र स्याज तिर्न नसकी धान फल्ने खेत बन्धक राखेर विदेशिएको व्यक्ति हो । ऊ सुरूमा दरवानी गर्दथ्यो । उसले दरवानीबाट फाइदा नदेखेर भाडाको रिक्सा चलाउन थालेको थियो । उसले जम्मा गरेर राखेको रूपैयाँ धनेले चोरे पनि हिक्मत हारेको पाइँदैन । नेपालबाट बाध्यताले विदेशिएका व्यक्तिहरुलाई उपचारदेखि मृत्यु हुँदासम्म दाहसंस्कारमा सहयोग गर्दथ्यो । त्यसै क्रममा देउताबाबुले वीरबहादुरलाई छहारीमा रिक्सा राखेर पान पसलअगाडि बिँडी तान्न लागेको भेट्दछ । त्यसैले, यस साक्षमा रुखको छहारीमा बस्ने बेलाको मौसमलाई जनाएको छ । विदेशिएका नेपालीहरु पनि गर्मीको समयमा सडकको छेउछाउको पार्कहरुमा बस्ने गरेको सङ्केत गरिएको छ । यस्तो शीतल ठाउँमा बस्दा मानिसहरु तनावमुक्त हुनका लागि धूमपान गर्ने गरेको देखाइएको छ । साथै, त्यस्ता समयमा समसामयिक चर्चा–परिचर्चा जोकोहीले पनि गर्ने गरेको सन्दर्भ साक्ष्यमा आएको छ । वीरबहादुरले देउताबाबुलाई धने गिरफ्तार भएको समेत जानकारी सोही ठाउँमा दिनु, धनेजस्ताले विदेशिएकालाई बदनाम गरेको बताउनु, ऋण तिर्नका लागि विदेशिएको भए पनि सत्य, मेहनत र प्राकृतिक सिद्धान्तमा बाँचेको सन्दर्भसमेत प्रस्तुत गर्नुले प्राकृतिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई पर्यावरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
७.२ शैक्षिक पर्यावरण
यस कथामा प्रयोग भएका शैक्षिक पर्यावरणलाई यसरी विश्लेषण गरिएको छ :
अब लौ, मेरो डल्लीलाई खत कसले लेखिदिन्छ… । मलाई कसैको चिठीसिठी लेख्ने फुर्सद छैन (पृ. ६१) ।
यस साक्ष्यमा वीरबहादुर नेपालको पहाडी गाउँको एक कर्मठ युवकका रुपमा देखाइएको छ । उसले आफ्नी श्रीमती डल्लीलाई देउताबाबुसँग चिठी लेखाउन पुग्दछ, तर देउताबाबु बस्ने ठाउँमा अर्को मान्छे बसेको पाउँछ । उसको फरासिलो बोलीचालीले गर्दा देउताबाबुजस्ताले सहरका आधाभन्दा बढी कुल्ली, कबाडी, दरवानी, रिक्सावाला नेपालीहरुको चिठी लेखिदिन्थे । बिरामी, ओखतीमूलो र बेखर्ची हुँदा सहयोग गर्थे । अब उनी गएको थाहा पाएपछि वीरबहादुर चिन्तित बनेको पाइन्छ । त्यसैले, शिक्षाका लागि २००७ सालतिर नेपालीहरुको उत्तम स्थल भारत रहेको सङ्केत देखिन्छ ।
नेपालीले शिक्षा लिनका लागि भारतजस्ता ठाउँमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन परेको वीरबहादुरजस्ता अशिक्षित नेपालीहरुको जीवनपद्धति शैक्षिक कारणले ह्रास भएको, शिक्षित मानिसहरुको जीवनपद्धति सामाजिक कारणले ज्यादै व्यस्त हुँदै गएको तत्कालीन अवस्थालाई शैक्षिक पर्यावरणका रुपमा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
हामी ठाउँठाउँका मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरु पनि रेडक्रसमा काम गर्नका निमित्त काङ्ग्रेसको हेड अफिसमा जम्मा भयौँ (पृ. ६८) ।
यस साक्ष्यमा नेपालीहरु २००७ सालको आसपासमा भारतका विभिन्न ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न पुगेको र त्यस समयमा पनि सहरमा रहेका मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरुको बर्चस्व रहेको सङ्केत गरिएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्नका लागिमात्रै नभई देशको बदलिँदो राजनीतिसँगै क्रान्तिमा होमिएको सन्दर्भ आएको छ । सोही समयमा वीरबहादुरजस्ताले मात्र सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउन परेको होइन, त्यस समयमा सबै स्तरका युवावर्गले विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको सङ्केत छ । त्यसैले, नेपालीहरुले प्राविधिक शिक्षाको चुनौती २००७ सालको आसपासको समयदेखि हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट दुःख व्यहोर्नु परेको देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति भइरहँदा सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको यथार्थ चित्रण पनि गरिएको छ । सबै नेपालीहरुले देशविदेशबाट क्रान्तिकारी पार्टी (काङ्ग्रेस)लाई सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यस क्रममा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले पनि रेडक्रसमा काम गरी क्रान्ति सफल पार्ने सन्दर्भमा शैक्षिक पर्यावरणको चित्रण गरिएको छ ।
वाह, एउटा सानो चिठ्ठी लेखिदिने टाइम छैन । साँच्चै आजकाल तपाईंहरु पढेलेखेका मानिसले दयामाया भन्ने कुरालाई ठ्याम्मै बिर्सिदिनु भो बा ! यो त बडो दुःखको कुरा हो (पृ. ६८) ।
यस साक्ष्यमा पढेलेखेका मानिसहरु सीमित ठाउँमा मात्रै रहेको यथार्थ चित्रण गरिएको छ । शिक्षित व्यक्तिहरुमा दयामायाको भावना नभई स्वार्थी प्रवृत्ति बढ्दै गएर चिठी लेख्न नमानेको पर्यावरण देखाएको छ ।
वीरबहादुर कथावस्तुमा अशिक्षित पात्रको रुपमा आएको छ । उसले घरपरिवारका लागि चिठी लेख्न जाँदा शिक्षित व्यक्तिको व्यवहारले पीडाबोध भएको देखिन्छ । उसले विदेशमा हुँदा चिठी लेख्ने र पढ्ने काम शिक्षित व्यक्तिबाट नै गराउँदै आएको हो । यसैले, यो कथा लेखनको समयमा अशिक्षित वर्गले सहरिया परिवेशमा काम लिन दुःख, कष्ट बेहोर्नु परेको सन्दर्भ शैक्षिक पर्यावरणका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । क्रमशः
(वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपाली विभाग)